"Ary amin'izany dia mikely aina koa aho mba hanana fieritreretana tsy manameloka ahy na amin'Andriamanitra na amin'olombelona mandrakariva" - Asa. 24:16.
Zavatra roa no mamaritra ny tanjaky ny toetra: ny herin'ny sitrapo sy ny herin'ny fifehezan-tena. Maro ireo tanora izay mihevitra fa ny filana miredareda sy tsy voafehy no atao hoe tanjaky ny toetra. Olona malemy izay fehezin'ny filany anefa izy, raha ny marina. Ny tena fahalehibeazana sy fahambonian'ny olona dia refesina amin'ny fahafahany mampilefitra ny fihetseham-pony, fa tsy amin'ny fahafahan'ny fihetseham-pony mifehy azy.
Tsy tokony hiala amintsika na oviana na oviana ny fifehezan-tenantsika. Aoka hataontsika eo anatrehantsika mandrakariva ilay Ohatra tonga lafatra. Fahotana ny miteny tsy amim-piheverana sy amim-piahiahiana, na ny mamela ny tena hoentin-katezerana - na tsy miteny aza isika. Tokony hitandro ny fahamendrehantsika isika ka hisolo tena marina an'i Kristy. Ny fanononana tenim-pahatezerana dia toy ny afo atehika amin'ny vanja: vao mainka mampirongatra ny fihetseham-po izany.
Aza mba toy ny voan-katsaka izay mipoaka rehefa tratry ny hafanana. Fadio ny manonona teny mahery na mandratra ao an-tokantrano. Aoka hasainao ho ao an-tokantranonao ilay Vahiny avy any an-danitra, ary ataovy izay hahatamana Azy sy ny anjeliny ao an-tokantranonao. Aoka horaisinao ny fahamarinan'i Kristy, ny fanamasinan'ny Fanahin'Andriamanitra sy ny fahatsaran'ny fahamasinana, mba hahafahanao maneho amin'ny manodidina anao ilay Fahazavan'aina. (...)
Hoy ny amperora malaza iray nialoha ny hahafatesany: "Amin'ireo fandresena rehetra azoko dia iray ihany no manome ahy fampiononana ankehitriny, dia ny nandreseko ny toetrako mitroatroatra izany". Mora kokoa ho an-dry Aleksandra sy Kaisara ny nampietry izao tontolo izao noho ny nampietry ny izahony. Rehefa avy nandresy firenena maro izy ireo, dia resy (...); ny iray "resin'ny tsy fahalalana onony, ary ny iray resin'ny avonavona diso tafahoatra". — CG, 95,96 Ny fifehezan-tena no porofo lehibe indrindra ny amin'ny fahambonian-toetra kristianina. — DA, 301.